राजनीति, धर्म र संविधान
‘रङ नम्बर’ डायल गरेर आजसम्म कसले पो ‘राइट आन्सर’ फेला पारेको छ?
अब उप्रान्त कसैले ‘नेपालमा नेतै भएन, नेतै भएन’ भन्ने राग लिखितम् वा बकितम्‌मा अलापेको थाह पाए, त्यो शास्त्रीय गायकलाई सोध्नुस् – किन भएन भन्न सक्नु हुन्छ?
राजनीति वा समाजशास्त्रको ज्ञाता भएको दाबी गर्ने, विश्लेषक वा सम्पादक बनेर बस्ने तर यो सारभूत प्रश्नबाट भाग्ने वा यस विषय राष्ट्रिय बहस नचलाउने हरकोही मेरो नजरमा ‘रङ नम्बर’ हो।
यति पढ्नेबित्तिकै यो प्रसंगको कुनै ‘उखान टुक्के’ उत्तर दिएर हतारोमा विद्वताको प्रदर्शन नगर्न विद्वत् समाजलाई सादर अनुरोध पनि गर्छु। यो प्रश्नको उत्तर आफूलाई थाहा छ भन्ने मेरो दाबी होइन। टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा काम गर्दा दुई-चारपटक यस विषयमा प्रश्न नउठाएको होइन तर सघनरुपले उठाउन सकिनँ। जुन घनत्वमा यो प्रश्न उठाउन पर्थ्यो, त्यो बाक्लोपनमा सकिनँ। यो प्रश्नको गुरुत्वबोध गर्नै जानिनँ। प्रश्न नै नउठाएपछि समाजले उत्तर पाउने कुरा पनि त भएन।
मैले पनि सजिलो थेगो रोजे – नेतै भएनन्, नेतै भएनन्। किन भएन? भन्ने कठिन बाटोतिर म लागिनँ।
तर अचेल यो प्रश्नबारे म सघन रुपले सोच्दैछु। यस सम्बन्धमा मेरा धारणाले आकार लिइसकेका छैनन् किनभने म अध्ययन मननकै क्रममा छु। म चाहन्छु- हामी सबै यस विषयमा गहरिएर सोचौँ।
यी प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। राजनीतिको क्षेत्रभित्र मात्र यी प्रश्नको उत्तर खोजे खण्डित उत्तर मात्र पाइन्छ। किनभने प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वका बिषयमा मात्र सीमित छैन। नेपाली राजनीतिलाई अर्थशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पर राखेर गरिने हर विश्लेषण ‘टुक्रे’ हुन्छ। सतही हुन्छ। र, अपूरो हुन्छ।
समाज निर्माणका निम्ति राजनीतिमा मात्र होइन, हर क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाको दरकार पर्छ। मिडिया पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन। राजनीति मुख्य हो तर बाँकी सबै क्षेत्रको नेतृत्व हैसियत पनि कतै न कतै एकआपसमा जोडिएकै हुन्छन्। एउटाको गुणस्तरले अर्कोलाई प्रभावित गरिरहेकै हुन्छ।
जस्तै, मिडियाले कुन विषय वा एजेन्डाको बहसलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ वा छैन भन्ने तथ्यबाट मिडिया नेतृत्वको आफ्नै हैसियत र कद पनि झल्किरहेको हुन्छ।
धेरैले भन्छन्- नेपालमा मिडियाको अकल्पनीय विकास भएको छ।
एक उदाहरण, आज देश यो हालतमा पुग्नुका पछाडि राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा जिम्मेवार छ भन्ने कुरा सन्देहरहित छ । तर यो प्रसंगमा हाम्रो बौद्धिक, वैचारिक मिडिया नेतृत्व पनि आ-आफ्नो भागमा पर्ने दोषबाट मुक्त हुन पाउँदैन। हामी पत्रकार राजनीतिक नेताहरुलाई ‘राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्छ’ भन्ने उपदेश त रातदिन दिन्छौँ तर आफैँ त्यसो गर्न सक्दैनौँ। किन?
‘नेपालको राष्ट्रिय हित’ भनेको के हो? के होइन? के के गरियो भने नेपाल बलियो हुन्छ? यो साधारणझैँ देखिने प्रश्नको उत्तरमा के हामी एकमत छौँ?
पुराना दिनमा हामीले राष्ट्रियताको प्रतिक मानेका केही आधार बाँकी नरहेको अवस्थामा पनि देश त कतै गएको छैन। ‘राजा नभए देश एकछिन पनि टिक्नै सक्दैन’ भनेर दसकौँ भनियो। तर खोइ त? यतिका वर्ष भइसक्यो देश त कतै गएको छैन!
देशमा गणतन्त्र आएको छ। तर राजतन्त्रको बिदाइ हुँदैमा गणतन्त्र आयो भन्न मिल्छ र? एउटा राजाको स्थानमा चार थान राजा हुनु, एक थान राजाले गरेको मोज चार जनाले संयुक्त रुपमा गर्नु नै गणतन्त्रको मानक हो र? समस्या ‘गण’ मा छ कि ‘तन्त्र’ मा छ? समस्या ‘राजा’ मा थियो कि ‘तन्त्र’मा थियो?
यी मूलभूत प्रश्नको उत्तर एक यस्तो पूर्वशर्त हो, जसको जवाफमा न्यूनतम ‘समझदारी’ हुनैपर्छ। म ‘समझदारी’ शब्द प्रयोग गर्दैछु ‘सहमति’ होइन। नजाने कुन बेवकुफले गिरिजाबाबुको टाउकोमा यो ‘सहमति’ शब्द चढाइदियो। आजसम्म सबै सहमति शब्दकै नाममा ‘देउसी रे देउसी रे’ गर्दैछन्।
अलग-अलग र फरक-फरक मत वा ‘मति’ भएकाबीच अक्षरश: ‘सहमति’ कहिल्यै हुनै सक्दैन। फरक-फरक ‘मति’ भएकाबीच ‘सहकार्य’ मात्र हुन सक्छ। निश्चित उद्देश्यका लागि ‘समझदारी’ हुन सक्छ। जस्तै- भारत र चीनबीच कैयौँ बिषयमा सहमति छैन, र पनि उनीहरु कैयौँ अन्य विषयमा ‘सहकार्य’ गर्छन्। ‘निश्चित’ उद्देश्यका लागि ‘समझदारी’ गर्छन्।
मदन भण्डारीलाई त्यसै जननेता भनिएको होइन। उनले निश्चयात्मक स्वरमा एक अन्तर्वार्तामा मलाई भने- यो संविधानमा हामीलाई चित नबुझेका कैयौँ कुरा छन्। तर हामी त्यसैमा हलो अड्काएर भविष्यको बाटो थुन्दैनौँ।
जो नेतालाई भविष्यका पुस्ताप्रति विश्वास हुँदैन, जसले सबैकुरा आजै गर्छु, अहिले नै गर्छु, मै गर्छु भन्छ यथार्थमा त्यसले केही पनि गर्दैन।
ज्यादै थोरै मानिसले, ज्यादै धेरै मानिसमाथि, ज्यादै लामो समय राज गरेको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन सकिन्छ र!
त्यसैले, अब एउटा नयाँ सिराबाट ‘सृजनशील’ बहसको थालनी गर्नु परेको छ। म ‘सृजनशील’ शब्दमा अत्याधिक जोड दिँदैछु। बडा गहिरो तवरले बुझिनु पर्छ - हामी ‘वैश्य युग’ मा बाँचिरहेका छौँ। वैश्य युग अर्थात् बजारको युग। वैश्य युग अर्थात् बजारको माग, उत्पादन र वितरणको युग। यो युगमा सफलता पाउन ‘सृजनशीलता’ अनिवार्य छ। विचारको क्षेत्रमा पनि सृजनशील विचार-विमर्शको दरकार छ।
मानिसले आफू कुन युगमा बाँचेको हो भन्ने बुझेर मात्र लेख्नु बोल्नु पर्छ। अन्यथा रनभुल्लमा परिन्छ। अहिले कैयौँ बन्धुबान्धवीमा युग चेतनाको ठूलो अभाव छ, विशेषगरी आफूलाई 'कम्युनिस्ट' ठान्ने केही मित्रमा। युग चेतनाको यो अभावले नेपाली राजनीति र समाज दुवैलाई रनभुल्ल पारेका अनगिन्ती उदाहरण इतिहासमा छन्। नेपाली समाजको चेतना विकासका निम्ति कम्युनिस्ट मित्रहरुले आजसम्म गरेका बलिदानको म आदर गर्छु। तर वैश्य युगका सम्बन्धमा वाममित्रहरुको युगचेतना अभाव पनि म बुझ्न सक्छु।
सामान्य पाठकको सजिलाका निम्ति म ‘वैश्य युग’ लगायत अन्य तीन युगको संक्षिप्त ‘प्रतिकात्मक’ व्याख्या दिन्छु। संसारमा पहिला ब्राह्मण युग थियो। जसले वेद जानेको छ, जसलाई बाइबल, कुरान वा धम्मपदका वा अन्य धार्मिक ग्रन्थका पंक्तिहरु कण्ठस्थ छन् – हो, उही ठूलो मान्छेमा गनिन्थ्यो। उसले भनेको सबले मान्नुपर्थ्यो।
त्यसपछि आयो - क्षत्री युग। जसको हातमा जति ठूलो तरबार, ऊ त्यही अनुपातको महान्। अलेक्जान्डर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, कुबलाइ खान द ग्रेट आदि तरबारी ग्रेटहरुको युग।
त्यसपछि ‘शूद्र युग’ आयो। कैयौँ हिन्दु शास्त्रमा ‘शूद्र’ शब्द अपमानजनक सम्बोधनका रुपमा छ। मेरो मनसाय त्यो होइन। २१ माघको नयाँपत्रिका दैनिकमा आदरणीय प्रदीप गिरि लेख्नु हुन्छ– मुख्य त विभिन्नथरिको सीप र परिश्रमसाथ गरिखाने वर्गलाई यहाँ शूद्र भन्ने संज्ञाले विभूषित गरिएको हो। शूद्रले श्रम र सृजनाको आधारमा उत्पादन गर्छ। क्यापिटलिस्ट वा पुँजीपतिका निम्ति वैश्ययुगको उपाधि प्रयोग भएको हो। विजयकुमारले यसै अर्थमा त्यो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छ मेरो आशा छ।
आदरणीय प्रदिप गिरिले आशा गर्नु भएअनुसार नै मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्दै आएको छु। मैले प्रतिकका रुपमा लिएको ‘शूद्र युग’ त्यो हो, जब हेपिएका, सबैभन्दा तल पारिएका वर्ग उठेर आफ्नो शासन स्थापित गरे। लेनिन, स्टालिन, माओ त्यो युगका नायक हुन्। परम्परागत कम्युनिस्टहरुको पराजयपछि यो युग अन्त्य भयो भन्ने मेरो सोच छ। आदरणीय प्रदिप गिरि ठान्नु हुन्छ साँचो अर्थको ‘शूद्र युग’ आएकै छैन। आउनै बाँकी छ। खैर, अहिले हामी वैश्य युगमा छौँ।
विगत केही दशकदेखि, विशेषत: सोभियत संघको पतनपछि हामी वैश्य युगमा प्रवेश गरेका छौँ। व्यापार र बजारको युग। राजीखुसीसित आफ्नो श्रम, शक्ति र सृजना बजारमा बेच्न पाइने युग। लिबरलाइजेसन, प्राइवेटाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन (LPG) यो युगका नयाँ वेदपुराण हुन्। यो युगका ब्राह्मणहरु धोती होइन, सुट-टाइ लगाउँछन्। मन्दिरमा होइन, करपरेट बोर्डरुममा बस्छन्।
वैश्य युगमा मानिससित समय धेरै छैन। ब्राह्मण युगका तर्कशास्त्र उसको निम्ति बेकार भएको छ। क्षेत्रीय युगको तरबार वा शूद्र युगको नाराबाजी र क्रान्तिमा उसलाई खासै रुची छैन। दैनिकहरुले प्रथम पृष्ठमा जतिवटा ‘विशेष’ सम्पादकीय छापे पनि वा हामीले टेलिभिजनमा जतिसुकै कराए पनि त्यसमा आजको आम पाठकले ‘विशेष’ केही देख्दैन। किनभने आजको आम मानिस एक्सपोजर, शिक्षा र जानकारीका हिसाबले त्यति ‘आम’ रहेन, जति हिजोका दिनमा थियो।
ऊ ठोस निष्कर्ष चाहन्छ, ऊ ठोस आर्थिक उत्पादनको चाहना राख्छ। चुस्त वितरण प्रणालीको अपेक्षा गर्छ।
यो युगको ‘ब्राह्मण’ तलब पाए जुनसुकै ‘बनियाँ’को जागीर खान सहर्ष तयार हुन्छ। किनभने यो समय ‘उत्पादन र वितरण सत्य, जगत् मिथ्या'को युग हो । उत्पादन ‘सृजनशीलता’सित जोडिएको कुरा हो। नाराबाजी जतिसुकै मीठो किन नहोस्, त्यसले मात्र मुखमा माड लाउँदैन भन्ने कुरा वैश्य युगको बच्चा-बच्चालाई थाहा भइसक्यो।
कारण? वैश्य युग सृजनात्मक उत्पादनशीलताको इन्धनबाट मात्र चल्छ भन्ने बोध नहुनु। निर्माण सृजनशीलताबाट मात्र सम्भव छ। ध्वंश जे सिद्धान्तको नामबाट गरे पनि हुन्छ तर निर्माण ‘सृजनशीलता’बाट मात्र सम्भव छ। चाहे हामी भवन बनाऔँ, चाहे संविधान, इन्धन एकै हो – ‘क्रिएटिविटी एन्ड कमिटमेन्ट’।
त्यसैले म सृजनात्मक र नतिजामूलक बहसको पक्षमा छु। म जनताको मुखमा माड लगाउने चर्चाको पक्षमा छु। म संविधान निर्माणका सन्दर्भमा विवादित भनिएका विषयमा स्पष्ट र नतिजामूलक निर्णयको पक्षमा छु।
अब म यो आलेखलाई संविधान निर्माणको ‘विषय’ मा प्रवेश गराउन चाहन्छु । तुलनाको दुस्साहस गरेको होइन, प्रेरणाले सिको गरेको मात्र हो। विनोद मेहता सम्पादक हुँदा ‘आउटलुक’ले भारतीय पत्रकारितामा निबन्ध लेखनको जुन फर्म्याट ल्यायो, त्यस्तै खाले शैलीमा लेख्न चाहन्छु। यो चलन पश्चिमा मुलुकहरुमा त धेरै पुरानो हो। 'न्युयोर्कर' पत्रिका त्यसैको एक उदाहरण हो।
मैले, भर्खरै संविधान निर्माणको ‘विषय’ भन्ने लाइन लेख्दा ‘विषय’लाई इनभर्टेड कमाभित्र राखे। किनभने त्यसको साटो म ‘हिस्टेरिया’ शब्द प्रयोग गर्न रुचाउँछु। त्यसपछि वाक्य बन्छ - नेपालमा संविधान निर्माणको हिस्टेरिया।
‘हिस्टेरिया’ शब्दको अर्थ हुन्छ- भावना वा उत्तेजनाहरुको अतिरन्जित प्रदर्शन।
मैले सल्लाह मानेँ। दुई वर्षपछि मात्र टेलिभिजन कार्यक्रम 'ठूला भ्रमः सत्य साधारण' मा भनेँ, अखबारमा पटकपटक लेखेँ- दुई नितान्त भिन्न राजनीतिक दर्शन मिलेर एउटा संविधानको निर्माण असम्भव छ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि आजसम्म आइपुग्दा बागमतीमा धेरै पानी बगेको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि माओवादीले देखाएको अहंकार, चीनले दिँदै नदिएको काल्पनिक आडको भरमा भारतसँग तिक्तिएको माओवादी सम्बन्ध, सेनापति कटुवाल प्रकरण, लडाकुको हतियार व्यवस्थापन, प्रथम संविधानसभाको अवसान, माओवादी पार्टीका विभाजन, दोस्रो संविधानसभाको नतिजा र भारतमा शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको उदय – केही यस्ता सूचक हुन्, जसले यसबीच बागमतीमा बगेको पानी र बितेको समयबारे स्मरण गर्न सघाउँछन्।
यो प्रश्नको उत्तर दिनुअघि, हिजो हामीले के गर्‍यौँ भन्ने स्मृतिमा राख्न अनिवार्य छ। किनभने ‘आज’ भनेको हिजोकै विस्तार मात्र हो। हिजोलाई नबुझी आज बुझ्न सकिन्न। ‘जे रोप्यो त्यही फल्छ’ त्यसै भनिएको होइन। होलान् केही बिरलै अपवाद, साधारण नियमचाहिँ एउटै हो – ‘आज’ भनेको हिजोकै फैलावट मात्र हो।
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा जुन राजनीति चल्दैछ, त्यसको जग हो – १२ बुँदे समझदारी। सही होस् या गलत ‘जग’ त्यही हो। भारतको सौजन्यमा भएको यो समझदारीपछि आजको मितिसम्म नेपाली राजनीतिमा यही ‘१२ बुँदे पार्टी’ निर्णायक रुपले हावी छ।
मेरो नजरमा संविधानसभामा जम्मा दुईवटा मात्र पार्टी छन्- ‘१२ बुँदे पार्टी’ र ‘कमल थापा पार्टी’।
नाङ्गो आँखाले हेर्दा आज सुशील कोइराला, ओली, प्रचण्ड र विजय गच्छेदार अलग-अलग पार्टीका सदस्य देखिए पनि मेरो विचारमा यिनीहरु एउटै पार्टीका सदस्य हुन्- १२ बुँदे पार्टी। यो ज्यादै बलियो पार्टी हो। संविधानसभामा लगभग सबै सिट यसै पार्टीको कब्जामा छ।
जुन दिनसम्म एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभाबाट राजीनामा गर्दैनन्, त्यो दिनसम्म यो १२ बुँदे पार्टी नै नेपालको एक मात्र निर्णायक पार्टीको हैसियतमा रहने छ। किनभने यो १२ बुँदे पार्टीको विपक्षमा रहेको एक मात्र पार्टी ‘कमल थापा पार्टी’ ज्यादै कमजोर छ। यसले जतिवटा रथयात्रा गरे पनि नतिजा यही रहने छ। यो नतिजा त्यो बेलासम्म उस्तै रहने छ, जबसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कमल थापाको रथमा सारथी बनेर सवार हुने छैनन्।
के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र कमल थापाको रथमा सारथी बनेर खुलेआम राजनीतिको मैदानमा उत्रने साहस गर्लान्? यो प्रश्न मैले ‍डा. तुल्सी गिरिलाई अनेक पटक सोधेँ। उतर हमेसा एकै आयो – सक्दैनन्। यही प्रश्न मैले उच्च भारतीय कुटनीतिज्ञहरुलाई धेरैचोटी सोधे। उत्तर हमेसा एकै आयो – पूर्व महाराजले यो जोखिम उठाउन सक्दैनन्।
आजको सत्य त यति मात्र हो – १२ बुँदे पार्टी नै अखडामा उपस्थित एक मात्र पहलमान छ। १२ बुँदे पार्टीमा बिखण्डन आयो भने मात्र हाल चलेको राजनीतिक शैलीलाई निर्णायक खतरा उत्पन्न हुनेछ।
तर के त्यसो होला र?
धर्मनिरपेक्ष राज्य र संघियताको प्रश्न
संविधान निर्माणमा जटिलता उत्पन्न गरिरहेका यी दुई संवेदनशील विषयमा मैले आजसम्म आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। संघीयताको विषयमा अर्को निबन्धमा चर्चा गर्ने छु। आज हिन्दु राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षताबारे आफ्नो विवेक साक्षी राख्न चाहन्छु।
जस्तै अंग्रेजी भाषाको ‘Religion’ शब्दलाई अंग्रेजी शब्दकोषले यसरी परिभाषित गर्छ-
हिन्दु धर्मका सम्बन्धमा चाहिँ ‘धर्मसापेक्षता’ वा ‘धर्मनिरपेक्षता’ दुवै शब्दको प्रयोग अर्थहीन छ किनभने राजा र राजपुरोहित वा दरबार र मन्दिरबीचको सम्बन्ध चर्च र स्टेटजस्तो कहिल्यै थिएन ।
‘हिन्दु’ कुनै धर्मको नाम मात्र होइन, यो त जीवनशैली हो। कुनै पनि देवीदेवता नमाने पनि सहजै हिन्दु हुन सकिन्छ। आस्तिक हुन पनि अनिवार्य छैन, नास्तिक भए पनि फरक पर्दैन।
‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्दलाई आदरपूर्वक विश्राम दिएपछि खाली हुने स्थानमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ पनि नलेखौँ। संविधान ‘मौन’ रहोस्। सनातन सभ्यतामा ‘मौन’ उच्चतम् अध्यात्मिक अभिव्यक्ति हो। सनातन परम्परामा मात्र होइन, अपितु सबै धर्म र पन्थले अलग-अलग भाषामा एउटै कुरा भनेका छन् – परम ज्ञान नि:शब्द छ, मौनमा छ।
हरथोक संविधानमा लेखिरहनु पर्छ र? आमाले सन्तानलाई कति माया गर्नु पर्छ भनेर हामी संविधानमा लेख्छौँ र? प्रेमीले प्रेमिकालाई दिनमा कतिपल्ट ‘आई लभ यु’ भन्नु पर्छ भनेर हामी संविधानमा लेख्छौँ र? आस्था, विश्वास र माया संविधानका अक्षरभन्दा धेरै माथिका कुरा हुन्। यिनलाई जबरजस्ती दलदलमा तल नघिसारौँ।
मेरो अर्को आलेख संविधान निर्माणको परिपेक्ष र संघियता विषयमा केन्द्रित रहने छ। आजलाई अस्तु !
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७१ ०६:५२:२७